Ag2O + H2O + 4NH3 → 2 [Ag (NH3)2] OH
oxide qalin biyaha ammonia
1 1 4 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2] OH
Waa maxay xaalada falcelin ee Ag2O (silver oxide) waxay kaga falcelisaa H2O (biyaha) waxay ula falgalaan NH3 (ammonia)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa [Ag(NH3)2]OH ()?
Dhacdada Ag2O ka dib (silver oxide) waxay la falgashaa H2O (biyaha) waxay la falgalaan NH3 (ammonia)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga [Ag (NH3) 2] OH, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2] OH
Su'aalaha la xidhiidha alaabta [Ag(NH3)2]OH ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee [Ag(NH3)2]OH (ammonia)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh [Ag(NH3)2]OH () alaab ahaan?
oxide qalin nitric acid amooniyam qalin biyaha
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ag2O + 2HNO3 → 2AgNO3 + H2O
Waa maxay xaalada falcelinta Ag2O (silver oxide) ee ka falcelisa HNO3 (nitric acid)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa AgNO3 (Nitrate Silver) iyo H2O (biyaha)?
Dhacdada Ag2O ka dib (silver oxide) waxay la falgashaa HNO3 (nitric acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ag2O + 2HNO3 → 2AgNO3 + H2O
Ag2O + 2CH3COOH → H2O + 2CH3COOAg
oxide qalin etanoic acid biyaha Acetate qalin ah; Acetic acid lacag (I) cusbo; Silver (I) acetate; Acetoxysilver (I)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ag2O + 2CH3COOH → H2O + 2CH3COOAg
Waa maxay xaalada falcelinta ee Ag2O (silver oxide) ee uu la falgalo CH3COOH (ethanoic acid)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo CH3COOAg (Silver acetate; Acetic acid silver (I) milix; Silver (I) acetate; Acetoxysilver (I))?
Dhacdada Ag2O ka dib (silver oxide) waxay la falgashaa CH3COOH (ethanoic acid)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga CH3COOAG (Silver acetate; Acetic acid silver (I) milix; Silver (I) acetate; Acetoxysilver (I)), oo soo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ag2O + 2CH3COOH → H2O + 2CH3COOAg
Su'aalaha la xidhiidha badeecada CH3COOAg (Silver acetate; Acetic acid silver(I) milix; Silver(I) acetate; Acetoxysilver(I))
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH3COOAg (ethanoic acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH3COOAg (Silver acetate; Acetic acid silver(I) milix; Silver(I) acetate; Acetoxysilver(I))
Ag2O + 4NH4OH → 3H2O + 2 [Ag (NH3)2] OH
oxide qalin ammonium hydroxide biyaha
1 4 3 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Ag2O + 4NH4OH → 3H2O + 2 [Ag (NH3)2] OH
Waa maxay xaalada falcelinta ee Ag2O (silver oxide) ee ka falcelisa NH4OH (ammonium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo [Ag(NH3)2]OH ()?
Dhacdada Ag2O ka dib (silver oxide) waxay la falgashaa NH4OH (ammonium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Ag2O + 4NH4OH → 3H2O + 2 [Ag (NH3)2] OH
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee [Ag(NH3)2]OH (ammonium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh [Ag(NH3)2]OH () alaab ahaan?